Ọzọkwa, Milton Shupe na ndị otu ya nyere anyị ihe atụ mara mma nke obodo anyị FSX / P3D. Dakọtara na Prepar3D v4. Gụnyere ihe ndozi 10, ụda olu omenala, ụlọ 3D zuru ezu na ndị ọzọ. Ihe ngwugwu a nwere ụdị 4 (turret, afụ ntụ, nlebara anya caret, na ibu ndi nkịtị) AT-11 bụ ọkọlọtọ U…. GỤKWUO
Milton Shupe, Scott Thomas, Damian Radice, na ụda site na Nigel Richards
Zuru ezu ngwugwu nke beech Expeditor Mk.III na ụdị nke ugbo ala na nke ibu nwere wiil ma ọ bụ floats maka iji ya rụọ ọrụ kachasị. FSX or FSX-Tezọ. Prepar3D dakọtara. Edere ya na akwụkwọ na usoro na PDF. Zuru ezu ụlọ kobere zuru oke na ụlọ nke ihe atụ nke 3D zuru oke. Customda omenala, na-ahụ maka ọhụụ. Gụnyere 4 re ... GỤKWUO
Milton Shupe na ndi otu ya, Vladimir Gonchar
Mara mma nke ochie na Hawker Siddeley HS748 repaints maka FSX & P3D na Belgium Air Force livery circa 1976 / 86. VC dị elu gụnyere gụnyere ihe atụ zuru oke. Ọtụtụ ndị na-ekele Michael Pook / Dave Rocholl maka idozi ogwe 2D. ederede site n’aka Stephen Browning. Customda gbadoro agbakwunyere.Le HS.748 est ... GỤKWUO
Ihe atụ sitere n'aka Rick Piper, nwaafo FSX/P3D ntụgharị site Rikoooo rụchara ọrụ site n’aka Stephen Browning
Beechcraft B1900D Regional Airliner FSX -ekpo ọkụ
Dị mma nke ukwuu panel na abụọ nsụgharị. All ngwá ndị functional.19 oche, ike na zuru aga aga, na-enwu na echiche textures. -Agụnye a 2D panel na mebere kokpiiti na a "Complete njem ụlọ, asaghe njem ụzọ na steepụ, ibu ụzọ na a" omenala ụda. Dakọtara na Accele ... GỤKWUO